Jiri nkwekọrịta edetu chekwaa ala hemp gị
Mgbapụta Hemp Ugbo ma ọ bụ Nkpuru osisi
Enwere m ike ịgbazite ahịhịa hemp m?
Ọ bụrụ na onye ọrụ ugbo nwere akwụkwọ ikike itolite hemp, ịnwere ike ịgbazite ugbo gị. Nkezi onye ala n’onwe ya enweghị ihe niile ọ kụrụ. Na, na Illinois, akwụkwọ ikike ikikere hemp na-enye ohere na-enye ohere ka ọ gosipụta na ọ gbazitere ugbo ahụ o bu n’obi ịgba ya hemp.
Gini mere Inwe nkwekọrịta maka ugbo hemp gị?
Ọtụtụ ugbo enweghị akwụkwọ mgbazinye ederede, ma ọ bụ mgbazinye edere ede dị afọ iri. Na Illinois ndị mmadụ nwere ike ịnwe ọgbụgba ịkọ ugbo, mana hemp adịghị ka agwa ma ọ bụ soy - hemp chọrọ ikikere site na steeti ma nwee ihe mgbochi megide onye nwere ike itolite ma ọ bụ hazie ya. Yabụ na ọ bụ ezigbo echiche iji ala na-ede ala gị.
Anyị ga-atụle ụdị ego ịkwụ ụgwọ maka ịgbazite ugbo ma nyekwa ụzọ uru atọ kachasị elu maka inwe akwụkwọ mgbazinye ederede maka azụmaahịa ugbo gị. Gwa a hemp ọka iwu banyere azụmahịa gị iji hụ na nchedo ya pụọ ​​n'ihe egwu na-amaghị.
Mgbazinye ego ma ọ bụ ihe ubi banyere ego ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ ugbo.
Ugbo ala na-adaba na isi abuo abuo: Mgbazinye ego, ma ọ bụ ekesa oke. Na Illinois, ebe 2019 ga-abụ afọ mbụ hemp na-akọ, ma ụdị mgbazinye bụ ihe a na-ahụkarị. Mgbazinye ọrụ ugbo na-adị ka ọ ga-akpọ maka mgbazinye ego dịka ọ na-akpọ maka ịkekọrịta ihe ubi, mana hemp nwere ike itinye onwe ya na aka nke mkpụrụ akuku maka ebumnuche ndị a dị n'okpuru.
Abamuru nke ato nke nkwekọrịta ugbo na ede
nọrọ na-agbaso usoro ọrụ kachasị mma
kọwaa n'ụzọ doro anya usoro nkwekọrịta na nchedo nye ma onye ọrụ ugbo ma onye nwe ala
tụọ usoro ịkwụ ụgwọ dịka “ego ụlọ” ma ọ bụ “kerịta mkpụrụ”
Nkwekọrịta mgbazinye ego
Mgbazinye ụlọ mgbazinye ụlọ ego dị mfe nghọta, ego maka mgbazinye. Onye ọrụ ubi hemp na-etinye ego ole ọ ga-akwụ kwa acre. Ọtụtụ mgbe ọ bụ naanị ụgwọ ụlọ abụọ na-abịa maka afọ ihe ubi, otu ihe dị ka March 1st, nke ọzọ abụrụ Ọktọba 1st, ma ọ bụ mgbe owuwe ihe ubi na-abata ime ka ihe ọkụkụ ahụ gaa n'ihu.
A na-erekarị ihe ọkụkụ n’etiti ndị na-ere ọka n’afọ ahụ niile - mana dịka 2019 bụ afọ izizi mbụ nke hemp - enweghị ike iji ire ọka na ọdịnihu anaghị ere mkpụrụ a n’enweghi ike dịka ngwa ahịa ndị ọzọ.
Ulo oru mgbazinye ego na-agbazite ahia na-uru na uru nke a na-ere site na mkpụrụ a na ịkọ amụma nke ụgwọ ụfọdụ akọwapụtara ruru.
Iwu ọka agaghị adị na ide - mana ịkwụsị ọrụ ugbo enweghị ihe ọ mere.
(735 ILCS 5 / 9-206) (site na Ch. 110, isi 9-206)
Sekọn. 9-206.Rịba ama iji kwụsị ịgbazite ala ubi.N'okpuru usoro nke Nkebi nke 16 nke Nlekọta na Tenant Act, iji kwụsị ala ụlọ site n'afọ ruo n'afọ nke ala ubi, na-arụ ọrụ na akuku, oke anụ ụlọ, mgbazinye ego ma ọ bụ ihe mgbazinye ndị ọzọ, a ga-enye ọkwa banyere ịkwụsị. na akwụkwọ edeghị ọnwa anọ tupu ngwụcha afọ nke ịhapụ ahapụ. Enwere ike ịhapụ ịma ọkwa dị otú a na mgbazinye ọnụ. Ma ọkwa iji kwụsị nwere ike ịbụ n'ụzọ dị mkpa:
Nye AB: A na-amara gị ọkwa na ahọpụtala m ịkwụsị ịgbazinye gị ụlọ ebe ị na-arụ ọrụ, ịbụ (ebe a kọwara ogige ahụ) ị na-emekwa ka ị gwa gị ka ị kwụsị ma nyefee m otu ihe ahụ. Ọgwụgwụ nke afọ mgbazinye, ụbọchị ikpeazụ nke afọ dị otu a (tinye ebe ikpeazụ ụbọchị mgbazinye akwụkwọ).
Mgbe onye ọrụ ugbo na onye nwe ala ahụ kwekọrịtara ịrụ ọrụ iji kọọ ihe ubi na iwe ihe ubi, mgbe ahụ, a ga-eme ka ekenye ihe ubi Anweta mkpụrụ akụ nwere ike ịkpọkwa ihe ndị ọrụ ubi. Onye nwe ubi na-agbara ihe ya n'ike, onye ọrụ ubi na-enye ọrụ na akụrụngwa, ha abụọ na-ekerekwa uru ma ọ bụ na ọghọm ya.
Ihe mgbawa ahịa Cannabidiol (CBD) na-akpali ọtụtụ ọrụ ịrụ ọrụ ịgha ọrụ ugbo. Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-abanye na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịkọ hemp ka ihe ọkụkụ ka mma karịa ihe enwere ugbu a. Brightfield Group kwenyere na CBD ga-abụ ụlọ ọrụ $ 22 ijeri dollar na afọ ole na ole.
N'ihi akụnụba ahịa, na ọ inụ dị na ụlọ ọrụ ahụ, nkwekọrịta ịkekọrịta ihe ọkụkụ nwere ike inye ndị ọrụ ugbo hemp ụzọ ị ga-esi soro ndị nwe ala kerịta uru ha. Enwere ike idozi usoro nkwekọrịta iji kesaa mmefu na uru ọ bụla onye ọrụ ubi na onye nwe ala chọrọ.
Kedere Ugbo ala Kachasị mma maka Hemp Farm gị?
Nke ahụ dabere n'ihe ịchọrọ na mgbazinye. Wantchoro ugwo a ga-aturu anya ya na onye nwe ala ka o ghara isonye na igha oru ugbo? Mgbe ahụ, tụlee nhọrọ ego mgbazinye ego. Mana lezienụ anya ka CBD daa nke ọma na ọnụahịa nke CBD ọgaranya hemp na-ada. Ọnụ ahịa na-ada ada nwere ike ime ka ego ịkwụ ụgwọ ụlọ ahụ dị elu na-egbu mgbu maka ndị ọrụ ugbo nọ na hemp.
Onye nwe ala nwere nrọ nke irite uru site na bonanza ahịa CBD, ma nwee ezigbo mmekọrịta ọrụ ya na onye ọrụ ugbo hemp? Mgbe ahụ nkwekọrịta ịkekọrịta ihe ubi na-enyere mmadụ abụọ aka ịkekọrịta ọnụ ahịa na uru dị na ụlọ ọrụ hemp ọhụrụ.
Onweghi azịza ọ bụla nke ziri ezi, mana enwere otu nnukwu ihe kpatara na mgbazinye ala hemp gị kwesịrị ịnwe ederede.
Hemp ohuru ma buru ezigbo usoro
Hemp ahụ nwere ike itolite ma ọ bụrụ na onye ọrụ ubi nwere ikike nke nyere ikike ịkọ ya. Onye ọka ubi hemp enweghị ike ịhazi hemp ọ gwụla ma edebanyere ya aha dị ka onye na-ahụ maka hemp. Steeti ga-enyocha hemp ma hụ na arụmọrụ dị n'usoro.
Ọbụghị naanị na akwụkwọ ịgba akwụkwọ hemp a na-ede ede na-ewepụta usoro dị nkwekọrịta ha abụọ nwere, ọ na-egosikwa na ugbo hemp gị na-agbaso omume kacha mma na ụlọ ọrụ. Inwe atumatu na usoro nke ala hemp ga enyere gi aka idi na nnabata ya na steeti na-enye ikike inweta ugbo hemp gi.
Jisie ike na-agha ihe ubi ohuru. Kpọọ ma ọ bụrụ n’ịchọrọ ka gị na ndị ọka iwu gị kwụọ maka ịgbacha ọsọ.